Schengen Zone miaraka amin'i Kroasia: Vaovao tsara ho an'ny fizahan-tany, vaovao ratsy ho an'ny filaminana?
Home » Schengen Zone miaraka amin'i Kroasia: Vaovao tsara ho an'ny fizahan-tany, vaovao ratsy ho an'ny filaminana?
Faly ny fizahan-tany any Kroasia satria lasa firenena visa “Schengen” ao amin'ny vondrona eropeana i Kroasia. Nahafeno ny fepetra teknika hanatevenana i Kroasia. Fa inona no dikan'ny fanitarana an'i Schengen ho an'i Eropa, ary afaka mandresy ny krizy politika momba ny sisintany ve ny EU vokatry ny fidiran'ny mpifindra monina nanomboka tamin'ny 2014?
Nandritra izany fotoana izany hoy ny filoha frantsay. "Tokony hamerina handinika lalina ny politikam-pampandrosoana sy ny politikam-pifindra-monina isika, na dia Schengen misy firenena vitsy an'isa aza." Tsy mieritreritra ny filoha frantsay fa mbola miasa i Schengen.
Kroasia dia hisolo tena ny fanitarana faritany voalohany an'i Schengen tao anatin'ny folo taona mahery rehefa vita ny fidirana tany Suisse tamin'ny taona 2008.
Ny faritra Schengen amin'izao fotoana izao dia misy 22 amin'ireo firenena mpikambana 28 an'ny EU ary koa mpikambana efatra tsy EU: Norvezy, Islandy, Suisse ary Liechtenstein. (Kroasia, izay niditra tao amin'ny EU tamin'ny 2013, dia iray amin'ireo mpikambana enina tsy ao Schengen, eo anilan'ny UK, Ireland, Bulgaria, Romania, ary Sipra.)
Manodidina ny 50,000 kilometatra ny sisin-tany ivelany ao amin'ilay faritra, raha ny filazan'ny Parlemanta eropeana.
Saingy noho ny fifindra-monina mbola manjaka amin'ny politika, sy ny firongatry ny populism, ary koa ny fanelingelenana Brexit, maro amin'ireo fepetra vonjimaika no mbola tsy niverina.
Viktor Orban any Hongria dia nanao renivohitra politika goavambe tamin'ny fefy sisin-tany misy ravina hareza miaraka amin'i Serbia sy ny kabary mahery setra momba ny fiarovana an'i Eropa amin'ireo mpifindra monina.
Firenena Schengen enina no mbola mampiasa fanaraha-maso ny sisintany anatiny: France, Austria, Germany, Denmark, Sweden, and Norvezy.
Ny fanaraha-maso ny sisintany dia olana lehibe amin'ny fidirana ho mpikambana ao Kroasia ao Schengen, tsy hoe satria ireo mpifindra monina dia manohy mampiasa ny Balkans ho lalana mankany Eropa andrefana, fa satria ny firenena Yugoslavia teo aloha dia manana sisintany 1,300 kilometatra miaraka amin'ireo firenena tsy EU.
Tsy maintsy nandresy lahatra an'i Bruxelles i Zagreb fa ho afaka hitantana tsara ny sisin-tany ivelany an'ny EU, amin'ny fotoana tena iharan'ny tsindry mafy indrindra hatramin'ny sisin'ny fianjeran'ny Berlin.
Ny faritra iray hafa misy olana dia i Pelješac, faritra atsimon'i Kroasia manondro an'i Montenegro. Amin'ny alalàn'ny tanibe ihany no ahatongavan'izany amin'ny alàlan'ny fiampitana amin'ny lalantsara tery amin'ny faritanin'i Bosnia izay natao hialana amin'ny ranomasina Bosnia. Ny fiampitana roa sosona dia efa anton'ny fahataran'ny fifamoivoizana mandritra ny fahavaratra, ary misy ny tahotra mety hiharatsy amin'ny fanaraha-maso ny sisin-tany henjana kokoa.
Saingy, i Kroasia dia antenaina hamita tetezana midadasika amin'ny 2021 izay mitety ny faritany Bosniaka; ny tetikasa dia nahemotra noho ny tahotry ny Bosniaka fa hanakana ireo sambo vaventy amin'ny fidirana amoron-dranomasina tokana.
Ny fidirana Schengen dia hanaisotra ny fanaraha-maso ny sisintany ho an'ireo mpizahatany 11.6 tapitrisa (75% amin'ny mpitsidika vahiny isan-taona) isan-taona mankany Kroasia avy amin'ireo firenena any amin'ny faritra Schengen, hoy ny mpandinika IHS Markit.
Izy io koa dia hampiroborobo ny fizahan-tany avy amin'ireo mpitsidika an'i Eropa, izay omena visa manan-kery ho an'ny firenena Schengen, amin'ny alàlan'ny fanampiana an'i Kroasia amin'ny làlana alehany.
Sandals Royal Caribbean Resort dia manana olana tianao ho fantatra